Tour – Somali Community
Xarunta Bulshada iyo Madani ah
Maxaad ku sawirtaa marka aad ka fikirto suuqa maxaliga ah? Alaabta lagu soo ururiyay khaanadaha, dabaq ilaa saqafka? Sheekada macaamiisha ee wada hadalka? Wajiga la yaqaan ee milkiilaha suuqa ee jooga maqalka gadaashiisa?
Waxa suuqyada yaryari ka maqan yihiin meel bannaan oo ay ku magdhabaan fursadaha xidhiidhada shakhsi ahaaneed iyo adeegga. Sida joogsiga joogtada ah ee nolol maalmeedka macaamiishooda, inta badan waa udub dhexaadka nolosha bulsho iyo bulsho ee bulshada.
Maanta waxa laga yaabaa in aan ka helno bulsho meelo badan oo u dhaxaysa shaqada iyo guriga – dukaamada qaxwaha, maktabadaha, dukaamada buugaagta, xarumaha bulshada, goobaha shirarka diinta, jardiinooyinka beesha, iyo suuqyada maxaliga ah. Sida qolalka fadhiga bulshada, meelahani waxay na siinayaan meel aan ku nasano oo aan ku xidhno.
Caadiyan, waxaad la kulantaa dad ka yimid dalkaaga. Qof kastaa hadda ma haysto wakhti uu ku kulmo, waxaan filayaa, waxay ku kulmaan guri ama xaflado. Waxaad halkan timi, waxaad ku hadli kartaa luqadaada, taas oo fiican, sidaas darteed waa qayb ka mid ah guriga.
—Vladimir Selec, macaamiisha, Euro Market, South Burlington
Qof kasta [oo] dukaanka dhex mara wuu la soo booqan jiray isaga oo wuxuu dhigay meel wanaagsan oo xaafadeed ah. Dhammaan iibiyayaashu way soo geli jireen oo booqan lahaayeen. Waxay ka hadli doonaan dhammaan noocyada kala duwan ee wax yaabaha bulshada iyo waxqabadyada – caruurnimada aad bay u fiicnayd in la dhegeysto, waxayna ahaayeen kuwo wanaagsan oo lagu daydo.
—Michal Allen, macmiil, George’s Market, Burlington.
Meesha waayo-aragnimada la wadaago
Haddi aad ku safari lahayd markab uumi ku shaqeeya sanadkii 1922 kii ama diyaarad 2022, socdaalka tahriibta waxa uu ka kooban yahay khasaare iyo fursad labadaba.
Soo-galootiga iyo qaxootiga waxay ka tageen qoys iyo saaxiibo, xirfado, lacag iyo alaab, hay’ado bulsho oo soo jireen ah, iyo aqoonsi ku qotoma dhulkii awoowayaasha. Waxay la yimaadaan rabitaan ay ku dhistaan nolol dhaanta naftooda iyo qoysaskooda. Suuqyadu waxay bixin karaan meel nabdoon oo lagu xidhidho macaamiisha iyo milkiilayaasha fahmaya khibrada. Halkan, dadka cusubi waxay ka raadsan karaan talo wax ku ool ah oo ay ka samaysan karaan curaarta iyagoo adeegsanaya luqadda caalamiga ah ee cuntada.
Dadka waxay yimaadaan halkan, waddan kala duwan, adduunyo kala duwan. Way argagaxeen wayna baqeen. Oo haddii aad siiso dareen diiran. Soo dhawoow. Kadib waxay dareemeen in meeshani u tahay meel u fiican oo ay dareemaan inay ka sii xoog badan yihiin, waxayna sii wadaan mustaqbal cusub oo ballaaran. Sida markii ugu horeysay ee aan imid Vermont, dadka Mareykanka, waxay i siiyeen dareenkaas xitaa ma fahmin iyaga, mana ay i fahmaan luqadda
awgeed. Waana sababta aan u fahmay.
—Anthony Tran, oo ay dhaleen milkiilayaasha John iyo Huong Tran, Suuqa Phat Thai, Burlington
Waxaan rabaa in macaamiishayda ay dareemaan guri. Oo waxaan garan karaa inay ku hadlaan Faransiis ama Sawaaxili ama Lingala, markaa halkaas ayaan ka soo qabsan doonaa, sababtoo ah waxaan ku hadlaa dhammaan luqadahaas, oo waxaan ka dhigaa inay dareemaan guriga oo ay ka iibsan karaan sidii iyagoo dib u sameynaya. guriga.
Chick had iyo jeer wuxuu lahaa dhoola cadeyn iyo sheeko.
—Lisa M. Boutin, macmiil, Suuqa Chick’s, Winooski
Waxaan u keeni lahayn dambiisha Christmas-ka iyo turkiga dadka. Aabbahay deeqsi buu ahaa. Wuxuu siin jiray cunno badan bulshada, dadka uu yaqaan. Sababtoo ah waxaad haysatay wakhtigaas oo ay arrimuhu yara adag yihiin markaad haysatid dhogorta dhogorta ee ordaya. Oo qof kastaa wuxuu ka shaqayn jiray warshadda dhogorta. Kadibna warshadihii dhogorta ayaa xidhay.
—Larry Roy, ina milkiilaha Emile Roy, Roy’s Market, Winooski
Adeegga macaamiisha ee suuqyada maxalliga ah waa ka badan yahay macaamil ganacsi.
Milkiilayaal badan oo suuqyadu waa hogaamiyayaasha bulshada. Waxay la taliyaan carruurta, caawiyaan dadka da’da ah iyo kuwa guryaha ku jira, waxay siiyaan kuwa aan baabuurta lahayn, waxayna u geeyaan cunto. Macaamiishu waxay inta badan raadsadaan caawimo si ay u dhex maraan xafiis-dawlad aan la aqoon, ha ahaato buuxinta waraaqaha sharciga ah, bixinta tigidhka baarkinka, ama helitaanka shaqo ama guri.
Cabdi, wuxuu ku bixiyaa saacado iyo saacado si uu u caawiyo bulshadiisa. Waxaad tagi kartaa halkaas-haddii aad haysato warqad, haddii aadan ku hadlin Ingiriisiga, wuu kuu turjumi karaa, soo dir codsiyadaada. Markaan eego isaga, waxaan u maleynayaa, “Wow, ninkani waa wax kale, wuxuu u qabanayaa shaqo cajiib ah bulshadiisa.”
—Axmed Cumar, Milkiilaha Jikada Kismaayo, Cabdi Nuur Xasan, Mulkiilaha, Dukaanka Bulshada Xalaal, Burlington
Aabbahay aad buu ii caawin jiray. Qof kasta oo u baahan, wuxuu ku dadaali lahaa inuu caawiyo. Mar walba wuxuu noo sheegi jiray inaan u naxariisanno kuwa danta yar, sababtoo ah waxaa naga dhexeeyay khad aad u khafiif ah. Waqti kasta, booskaas waan ku jiri karnaa, waxaad soo saartayna waad soo laaban doontaa.
—Judy McLaurin, milkiilaha iyo gabadha aasaasayaasha John iyo Mildred McLaurin, J & M Groceries, Burlington
Ma ahan dukaameysi kaliya. Waxaan ka hadalnaa filimada, waxaan ka hadalnaa ciyaaraha, waxaan ka hadalnaa qorshayaasha mustaqbalka, nolosha qoyska…suuqa waa meel fiican oo lagu kulmo dad badan, dhaqamo badan.
Meesha Xaafada la isugu yimaado
Suuqyadu waa dun isku xidha dadka.
Waxay yihiin isha nafaqeynta niyadeed iyo jireed, oo lagu dhex daray nolol maalmeedka dadka deegaanka. Macaamiishu waxay u yimaadaan inay wax soo iibsadaan oo ay raagaan si ay wakhtiga u dhaafaan.
Nuskii hore ee qarnigii labaatanaad, nolosha deegaanka iyo ganacsiga ayaa ku milmay xarumaha magaalada. Iyada oo suuqyadu ay ku xidhmeen xaafadaha, isdhexgalka maalinlaha ah ayaa ahaa mid sahlan. Dadku waxay u istaageen xabbad rooti ah, gallon caano ah, ama hilib laga soo jaray goobta hilibka lagu iibiyo. Carruurtu waxay u ordeen hawlo waalidiintood, iyagoo u hamuun qaba nacnac dinaar ah oo gacantu gaadhi karto.
Maanta macaamiisha qaarkood waxay ku nool yihiin meelo ka durugsan suuqyada xaafadaha ama agagaaraha guryaha la heli karo. Waxaa laga yaabaa inay wax ka iibsadaan marar badan oo ay ku yimaadaan bas ama baabuur. Soogalootiga iyo qaxootiga, si kastaba ha ahaatee, xidhiidhka shakhsi ahaaneed ee suuqyada yaryar ayaa weli ah qayb muhiim ah oo noloshooda ah.
Dukaankayagu waxa uu ahaa xarun dhaqdhaqaaqeed. Waxaan haysanay laba nin oo maalin walba soo gala, oo waxay geli jireen qaboojiyaha oo ay qamrigooda soo qabsan jireen. Oo si dhuumasho ah geesta uga soo dhuuntaan si ay aabbahay ula hadlaan oo ay dhalada biirka ah ku cabbaan. [Boostada] way soo geli jireen oo waxay iibsan jireen alaab. Fur weel bolse ah ama weel ukun la dubay, ka dibna halkaas ku dhaaf. Annaga carruurta yaryar ayaa geli jirnay oo la hadli jirnay iyaga, mar walbana wax badan ayay lahaayeen.
—Larry Roy, ina milkiilaha Emile Roy, Suuqa Roy, Winooski
Ma garanaysaa sababta ay muhiim iigu tahay? Taasi waa meesha aan ka heli karo oo keliya cunnadayada Afrikaanka ah, wax kasta oo dhaqan ahaan ah, way fududahay sidoo kale in la isku xidho maadaama labadeenaba aanu nahay muhaajiriin. Waad ogtahay marka aad ka imanayso meel kale oo adduunka ah, inaad had iyo jeer rabto inaad cunto cuntada aad ku korto.
—Malinga Mukunda, macmiil, suuqa Neebaalka RGS , Burlington
Uma baahnid inaad marto jeegaga deynta si aad cuntada u hesho. Silbasho yar ayaa la sameeyay, dhammaan waxaa loo sameeyay si qarsoodi ah. Aabbahayna, abtiyaashay way garanayeen cidda ammaanta u baahan. Silsiladda waxaa lagu dhejin doonaa ciddiye, ma aha mid aad u casrisan nidaamka xisaabaadka. Aakhirkiina markuu qofku lacag bixin karo, way soo noqon jireen oo waxay ahayd nidaam kalsooni.
—Louis Mario Izzo, awow u ah aasaasayaasha Louis iyo Concetta Izzo, Suuqa Izzo, Burlington
Had iyo jeer dadka waxaan u sheegaa inaan halkaan u joogo 24/7, haddii ay u baahan yihiin wax. Waxaa jira waqtiyo ay dadku daahaan, oo ay kari waayeen ‘ilaa toddoba, halkan ayaan ku sugi doonaa iyaga. Waxaan geyneynaa guryaha inta lagu jiro waqtiyada COVID. Waxaan bulshadayda ugu deeqi lahaa rootigayga bilaha ramadaan si dadka masaajidka jooga ay ugu casheeyaan.